Archives an'ny hevitra - Fanentanana manerantany ho an'ny fampianarana momba ny fandriam-pahalemana
Fampianarana: Fanamby amin'ny toe-javatra misy fifanolanana
Oktobra 22, 2021 0
Nitombo ny fanafihan'ny mpampihorohoro amin'ny tanjona fanabeazana tato anatin'ny taona vitsivitsy. Humanitarian Aid Relief Trust dia mandinika ny fironana ankehitriny ary mizaha ny vahaolana hiadiana amin'ny herisetra mahery setra. [tohizo ny famakiana…]
Septambra 27, 2021 0
Ity taratasy misokatra iray avy amin'ny vehivavy matihanina iray ity, ny mpitantana ny oniversite Afghana dia tokony hanao fanamby amin'ny vehivavy amerikana rehetra hiatrika ny vokatry ny fandaozan'ireo vonona indrindra hitarika an'i Afghanistan mankany amin'ny maha mpikambana maha-mpikambana azy eo amin'ny fiarahamonina manerantany: ny vehivavy nahita fianarana sy mahaleo tena tompon'andraikitra tamin'ny tombony azo fitoviana ara-tsosialy ankehitriny nohitsakitsaky ny Taliban. Miaraka amin'ny fanampian'ny Biraon'ny White House miatrika raharaha momba ny maha-lahy na maha-vavy, ny taratasy tany am-boalohany, tsy misy fiovana natolotra ny filoha lefitra Kamala Harris dia natolotra ny biraon'ny filoha lefitra. Manantena izahay fa hovakiana sy hodinihina amin'ny taranja fandalinana fandriam-pahalemana sy fanabeazana ny fandriam-pahalemana ihany koa ity mba hanomezana feo ireo vehivavy tsy voatanisa ao Afghanistan amin'ny toe-javatra mitovy amin'ny mpanoratra, ny sasany amin'izy ireo dia antenainay fa hahita toerana ao amin'ny oniversite sy oniversite misy anay. [tohizo ny famakiana…]
Septambra 22, 2021 0
Ny masoivoho Anwarul K. Chowdhury, sekretera jeneraly lefitra teo aloha ary solontenan'ny Firenena Mikambana ary mpanorina ny Global Movement for The Culture of Peace, dia niresaka tamin'ny Konferansa voalohany momba ny andro fanabeazana fandriam-pahalemana izay nokarakarain'ny The Unity Foundation sy ny Peace Education Network. Ny mpikarakara ny fihaonambe dia manohana fandaharam-potoana hamoronana “Andro fanabeazana ho an'ny fandriam-pahalemana manerantany.” [tohizo ny famakiana…]
Fampianarana fandriam-pahalemana ho an'ny zom-pirenena: fomba fijery ho an'i Eropa Atsinanana
Septambra 20, 2021 0
Eoropa Atsinanana tamin'ny taonjato 20-21 dia nijaly mafy tamin'ny herisetra ara-politika sy ny ady mitam-piadiana. Fotoana hianarana hiara-hiaina am-pilaminana sy hikatsahana fahasambarana. [tohizo ny famakiana…]
Ny rivotry ny ady: ny kolikoly dia tsy miankina amin'ny andrim-panjakana
Septambra 19, 2021 0
"Rehefa nandeha ny tetik'asa fananganana firenena… dia navadika ho governora, jeneraly ary mpikambana ao amin'ny Parlemanta ny mpiadin'ady ary ny fandoavambola dia nitohy hatrany." Toy izany no nanoratan'i Farah Stockman momba ny kolikoly manjaka izay nifandray tamin'ny ady tamin'ny fampihorohoroana toy ny tany Afghanistan. [tohizo ny famakiana…]
Septambra 17, 2021 0
Ny Inter-Country Quality Node momba ny fanabeazana momba ny fandriam-pahalemana dia mamporisika ireo minisitry ny fanabeazana any amin'ny fanjakana afrikanina hanova ny rafi-pampianarany mba hampiroboroboana ny fandriam-pahalemana, ny fisorohana ny fifandonana, ny famahana ny fifanolanana ary ny fananganana firenena. [tohizo ny famakiana…]
Izay adinontsika amin'ny 9/11 - ny tena dikan'ny hoe 'aza adino mihitsy'
Septambra 13, 2021 1
Ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana dia tsy maintsy mandinika sy manombana ny vidin'ny olombelona amin'ny ady. [tohizo ny famakiana…]
Fongory izao i Nukes!
Jona 29, 2021 0
Ny ratsy ara-tsosialy dia mitaky valiny ara-tsosialy. Ho an'ny vondrom-piarahamonim-pirenena momba ny fandriam-pahalemana, tsy midika fotsiny izany ny famotopotorana ireo olana ara-etika nateraky ny fitaovam-piadiana niokleary, fa koa manome ny fiheverana mitovy ny andraikitra ara-etika ataon'ny olom-pirenena mba hanafoanana azy ireo. [tohizo ny famakiana…]
Ny fanambarana ao amin'ny White House momba an'i Afghanistan dia misy ny fanamafisana ny fiarovana sy ny zon'ny vehivavy
Jona 27, 2021 0
Ny fanambarana tao amin'ny White House tamin'ny fivorian'ny filoham-pirenena Biden sy Ghani avy any Afghanistan dia naneho ny fijerin'ny fitondrana ny olana natolotry ny fiarahamonim-pirenena izay manasongadina ny fandrahonana ny fiarovana ny vehivavy Afghana vokatry ny fisintahan'ny tafika amerikana. [tohizo ny famakiana…]
Zavatra, Fahatsiarovana ary fanatsarana ny filaminana
Enga anie 28, 2021 0
Tsy misy fahamarinana tokana momba ny lasa. Na izany aza, raha ny filazan'ilay manam-pahaizana momba ny Rei Foundation, Dody Wibowo, dia iharan'ny tsy fahitana isika indraindray ary angatahina hino amina kinovan'ny tantara tokana. Ampiasao ny masom-pianarana fandriam-pahalemana, mangataka antsika izy handinika ny antony manosika sy ny paikadin'ireo tranombakoka tantanan'ny governemanta, ary manolotra fomba iray handrosoana amin'ny alàlan'ny fomba fanaon'ny tranombakoka izay manampy amin'ny fandriampahalemana. [tohizo ny famakiana…]